चीनले आफ्नो अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउन विदेशी लगानी लगाउने/नलगाउने विषयमा टुंगो लगाएर यसका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण गरेको थियो भने विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि दक्षिणी तटीय प्रान्तहरू चयन गरेको थियो ।
वासिङ्टन-स्थापित विश्वशक्ति अमेरिका विश्वको उदीयमान विश्वशक्ति चीनसँग सहअस्तित्वमा रहन सक्ने पूर्व अमेरिकी अर्थमन्त्री ज्याक लिउले बताए ।
विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रका लागि एकसाथ काम गर्नु वास्तवमै महत्वपूर्ण भएको उनले बताए ।
यदि नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्ने इच्छा व्यक्त गर्ने हो भने चीनले जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने ओबामा प्रशासनका अधिकारीले बताए ।
“स्थापित शक्तिले उदीयमान शक्तिलाई नेतृत्वको भूमिका आउन दिनबाट रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म छैन । अमेरिका र चीनबीच विवाद भएकोमा म सहमत छैन,” उनले भने ।
यद्यपि ह्वाइट हाउसमा बाराक ओबामाको कार्यकाल २०१३ देखि २०१७ को अन्त्यसम्मको अवधिमा अमेरिकी अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गरेका लिउले चेतावनी दिएका छन्, “मलाई लाग्छ, यदि अमेरिका बाहिरियो भने, जुन व्यापार नीतिका कारण भइरहेको छ, यो कठिन हुन सक्छ ।”
मंगलबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले वार्षिक व्यापारको २ सय अर्ब डलरको मूल्य पर्ने चिनियाँ सामग्रीमा १० प्रतिशतको भन्सार लगाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । अमेरिकाले ३४ अर्ब डलरको चिनियाँ सामानमा भन्सार लगाएको बदलामा चीनले प्रतिकारात्मक कारबाही गरेमा ट्रम्पले ५ सय अर्ब डलरको चिनियाँ समानमा भन्सार लगाउने चेतावनी दिएपछिको समयमा अमेरिकाले उक्त घोषणा गरेको हो । बेइजिङले पनि जुलाई ६ बाट कार्यान्वयनमा आउने गरी ३४ अर्ब डलरको अमेरिकी सामानमा भन्सार लगाइसकेको छ । चीनले अमेरिकी कारबाहीलगत्तै आफ्नो बदलाको भन्सार कारबाही सुरु गरिसकेको छ ।
ट्रम्पले लोकप्रियताका लागि यो काम गरेकोमा कुनै शंका नभएको लीउले बताए । अमेरिकाले पक्षपातपूर्ण प्रतिस्पर्धामा हारको सामना गरिसकेको उनले बताए । तर, यसको अर्थ हालको प्रशासनको व्यापार नीतिहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नेमा ठोकुवा गर्न नसकिने चेतावनी उनले दिए ।
अमेरिका–चीनबीचको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दैै लिउले भने, “व्यापारघाटाम केही कुरा छुटेका छन् । वास्तविकता के हो भने के चीनले अमेरिकी उत्पादनका लागि आफ्नो मुलुक खुला गरेको छ ? के चीन अमेरिकी लगानीका लागि खुला छ ? के चीनका नीतिहरू बौद्धिक सम्पत्तिको मामिलामा स्पष्ट छ ? ताकि यसले चिनियाँ बजारमा व्यवसाय गर्दा बौद्धिक सम्पत्ति हस्तान्तरणको अवस्था नआओस् ।
ट्रम्पले अमेरिकी व्यापार नीतिलाई पुनः मूल्यांकन गरेकोमा ट्रम्पले विश्वका आफ्ना गठबन्धन मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिद्वन्द्वीबाट आलोचनाको सामना गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।
आर्थिक सुधारपछि चीनले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्थाका रूपमा विश्वमै असर देखाएको हुनाले पनि अमेरिकालाई चीनसँग मिलेर जानुको विकल्प छैन । यस्तै, आजको मितिमा चीनसँग विश्वकै सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भण्डार (३.१२ खर्ब डलर) छ । जीडीपी (११ खर्ब डलर) को आकार मामिलामा दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो चीन । त्यस्तै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्नमा चीनले विश्वमा तेस्रो स्थान सुरक्षित गरेको छ ।
चीनले आफनो अर्थव्यवस्था मजबुत बनाउन घरेलु अर्थव्यवस्थामा क्रमिक सुधारको प्रक्रिया शुरू गरेर बजारप्रतिको भरोसालाई छोडिदिएको कारण पछिल्ला वर्षहरुमा तीब्र विकास भएको छ । चीनले आफ्नो अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि विदेशी लगानी लगाउने अथवा नलगाउने भन्ने विषयमा टुंगो लगाएर यसका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण गरेको थियो भने विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि दक्षिणी तटीय प्रान्तहरू चयन गरेको थियो । २०१५ मा चीन विदेशी व्यापारमा विश्वकै अगुवा राष्ट्र बनेर उदाएको चीनसंग मित्रता राख्नु अमेरिकाको व्यापारका लागि पनि बाध्यता छ ।